Nagarik News - खपिनसक्नुको हाँसो
शुक्रबार २३ श्रावण, २०७१
पोहोर साल गाईजात्राको दिन मलाई सहिनसक्नु हास उठ्यो। सभागृहमा कार्यक्रम थियो। म हनुमानको भूमिकामा थिएँ। हनुमानको लुक्समा स्टेजपछाडि दौडिँदै थिएँ। दुई/तीनजना मान्छे मेरो छेउमा आएर शिर निहुराउँदै नमन गरे। सुरुमा त तर्सिएँ। पछि, हास उठ्यो। भित्रैदेखि काउकुति लागेर आयो। स्टेज चढेपछि पनि अगाडि लहरमा बसेकाले मलाई हनुमानजी ठानेर ढोगे। त्यसपछि त मलाई खपिनसक्नु भयो। बल्लतल्ल हाँसो कन्ट्रोल गरेको थिएँ।
दुई वर्षअघिको एउटा कार्यक्रममा म सुजाता कोइराला, निर्मल शर्मा 'गैँडा' चाहिँ मेरो पीए हुनुभएका थिए। निर्मलले मलाई बोक्नुपर्ने सिन थियो। मलाई बोकेर एउटा डाइलग भनेपछि मेरो बोल्ने पालो आउँथ्यो। स्टेजमा हामी मजाले प्रस्तुत हुँदै थियौँ। जब मलाई बोक्नुपर्ने भयो, उहाँले उचाल्नासाथ सारी चिप्लिएर म तलतल खस्न थालेँ। उहाँ डाइलग भन्न छाडेर मलाई माथि सार्न थाल्नुभयो। म खस्दै गएँ। उहाँले बोकेजसो गरेर डाइलग भनेको भए म पनि उत्तर फर्काएर तल झरेझैँ गर्थें। तर, उहाँ बोल्नुभएन। त्यो देखेर मलाई बेस्सरी हास उठ्यो। स्टेजमै खित्का छोडेँ।
म मेरी आमालाई मामु भनेर बोलाउँछु। सिरियलमा चाहिँ ममीलाई आमा भन्नुपर्छ। सुटिङ सकाएर घर फर्किंदा कहिलेकाहीँ मामुलाई पनि झुक्किएर आमा भन्छु। त्यस्तै, सिरियलमा बुवालाई बा भन्नुपर्छ। घर गएर बुवालाई बा भन्दा कम्ती हास उठ्दैन। एकचोटि विष्णु (सापकोटा) दाइले एकजना दिदीको नक्कल गरेको देख्दा पनि साह्रै हास उठेको थियो। दाइले ती दिदी 'यसरी नाचिन्' भन्दै फनफनी घुमेर नाच्नुभएको थियो। दाइको हाउभाउ देख्दा हास उठेर झन्डै मरेँ।
पहिलोचोटि फतौरी बुढीको अभिनय गर्दा खुब हासउठ्दो भयो। हामीले सुटिङ गरेको गाउँका मान्छेले 'सुटिङको बीचमा को बौलाही बुढी आइछ' भन्दै मलाई लखेट्न खोजे। सुरुमा मैले कुरा बुझिनँ। 'के गर्छन् यी मान्छेहरू?' भनेर रिसाएँ पनि। कुरा बुझेपछि हास उठ्यो। गेटअप फेरेर सुन्तली भएपछि मैले 'त्यो बुढी पनि मै हो' भन्दा उनीहरू आश्चर्यचकित भएका थिए। त्यो क्षण सम्भि्कँदा अझै पनि हास उठ्छ।
'चुप चुप के' फिल्म हेर्दा असाध्यै हास उठेको थियो। त्यसमा राजपाल यादवको सिन छ एउटा। उनले रोटी माग्छन्। रोटी दिइन्छ। तर, त्यो एकदम साह्रो र सुक्खा हुन्छ। उनले टोक्नै सक्दैनन्। रोटी टोक्दै 'आरी मिलेगा?' भन्छन्। तर, त्यहीबेला उनलाई भान्छेले अरू चार/पाँचवटा रोटी थपिदिन्छन्। उनी रिसले चुर भएको सिन जति पल्ट हेरे पनि हास उठ्छ। एकचोटि 'झ्याइँकुटी झ्याइँ'को सुटिङ गर्दा पनि भव्य हास उठेको थियो। म भिरालो ठाउँमा उभिएकी थिएँ। डाइलग भन्दाभन्दै चिप्लिएर तल लडेँ। अरू मुसुमुसु हाँसे। मलाई लाज लाग्यो। बेलुका घर गएपछि कोठा थुनेर एक्लै हाँसेँ।
'भद्रगोल' का लागि हामीलाई एकजना झाँक्री पात्र चाहिएको थियो। कसलाई गराउनु भइरहेको बेला शंकर (आचार्य) दाइले नै गर्ने टुंगो भयो। उहाँलाई झाँक्रीको पहिरन खुब सुहायो पनि। तर, जब उहाँ ढ्यांग्रो ठोकेर थरथरी काम्दै डाइलग भन्न थाल्नुभयो, हामी हाँसेको हाँस्यै भयौँ। उहाँले सबै डाइलग उल्टोपाल्टो बोल्नुभयो। जति टेक लिँदा पनि लाइन बिगे्रको बिग्य्रै भयो। एकातिर टाइम लस भएकोमा हामी पिर मान्दै थियौँ, अर्कोतिर उहाँको डाइलग सुनेर नहाँसी बस्नै नसक्ने अवस्था थियो। डाइलग हामीलाई कण्ठ भइसक्दा पनि दाइले मिलाएर नभनेको देख्दा यति हाँसियो, भनिसाध्य छैन। हिन्दी फिल्म 'बिल्लु बार्बर' मा पनि एउटा यस्तै दृश्य छ। हाम्रो मामिलामा साँच्चै यस्तो भयो।
एक दिन म ऐनाअघि बसिरहेको थिएँ। कोठामा दाइ, दिदी पनि थिए। उनीहरूदेखि धक लाग्दैन मलाई। त्यसैले ऐना हेर्दै 'म त पूरा ह्यान्डसम हुन थालेछु। यस्तै ताल हो भने १५/२० वटी केटी कसो नपट्याइएला? हुन त एक दर्जनजति अहिले नै लाइनमा छन्' भन्दै थिएँ। दाइ/दिदी हाँस्न थाले। के भएछ भनेर फनक्क पछाडि फर्केको त ड्याडी पो उभिनुभएको! मेरो त सातो गयो। मार्नु हुने भयो ड्याडीले भन्ठानेँ। तर, उहाँले जुन तरिकाले गाली गर्नुभयो, त्यो सुनेर मलाई बेस्सरी हास उठ्यो। दाइ/दिदी पनि मरिमरि हाँसे।
म पहिलोचोटि मलेसिया जाँदाको कुरा हो। एयरपोटमा झर्नासाथ म, एकजना नायिका र एकजना गायक ग्रुपबाट छुट्टियौँ। गायकजीले 'तपाईंहरू नआत्तिनुस्, म एघारौँ पटक मलेसिया आएको हुँ' भने। हामी ढुक्क भयौँ। ग्रुप खोज्दै यताउति गर्दा फ्लोर एक्सिलेटर भएको ठाउँमा पुगिएछ। नायिकाले 'किन हिँड्नु, यसमै चढेर जाऊँ' भनिन्। चढ्यौँ। एक्सिलेटरबारे ज्ञान नभएकाले ओर्लिने बेला मेरो बुटको हिलै भाँच्चियो। परेन फसाद! अर्को जुत्ता लगेजमा थियो। लगेज निकाल्न इमिगे्रसनसम्म पुग्नैपर्योब। दुइटै बुट हातमा बोकेर खाली खुट्टा हिँडेँ। इमिग्रेसनमा पुग्न टे्रन चढ्नुपर्ने रैछ। गायक दाइले 'मलाई थाहा छ' भन्दै चारचोटि एउटै ठाउँमा ओहोरदोहोर गराएपछि हामी 'आफैँ खोज्छौँ' भन्दै फन्कियौँ। उहाँ पछिपछि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। पछि लगेज निकालेर ग्रुप भेट्टाउँदा त गायकजी छैनन्। एघारौँचोटि मलेसिया आएको मान्छे हराएछन्। त्यो सबै घटना सम्झिकएर म र ती नायिका मरुञ्जेल हाँसेका थियौँ।
महाभैँचालोले घर ध्वस्त भएपछि परिवारका सबै सदस्य अट्ने त्रिपाल व्यवस्था गर्न पंक्तिकारलाई दुई साता लाग्यो। विपत्को पूर्वतयारीमा खासै काम नगरेको सरकारी संयन्त्रले आफ्नो च्यानलबाट भैँचालो पीडितसमक्ष अझैसम्म पर्याप्त राहत पुर्याकउन...
सौता लागिन् रीमा
सुन्दरी अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माका लागि मरिहत्ते गर्ने 'कुमार' केटाको संख्या कम हुने कुरा भएन। तर, रीमा भने सौता लाग्न गएकी छिन्। उनलाई मनकी रानी बनाउन खोज्नेले आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन किनभने...
राजमार्ग लाइभ : थानकोटदेखि नारायणगढसम्म
लोकमार्ग पनि भन्न थालिएको छ राजमार्गलाई। त्यसो त यसले ठगीमार्गको नाम पाएको पनि धेरै भइसक्यो। मान्छेसँग मान्छे, संस्कृतिसँग संस्कृति जोड्दै राजमार्गले नेपालको विकासमा सघाउ नपुर्‍याएको होइन। तर, राजमार्गकेन्द्रित व्यापारका नकारात्मक...